Amasayithi esikhaleni olubonakalayo inani elikhulu. Umbala wawo ngokuvamile ezithakazelisayo noma cha, isifanekiso noma ahluke. Ziyakwazi ukungalingani navigation, unemenyu imifanekiso ehlukene, futhi, ngokuvamile, abaningi kubo okuyizingane kancane zifane nomunye. Kulokhu, umsebenzi umklami, ukufaka ikhodi kwanoma iyiphi web-isisetshenziswa - omningi ukuthi lidinga ngalokuphatselene nelwati, emakhono ezezimali kanye.
Nokho, kuyinto futhi abanye imininingwane kumawebhusayithi akudingi ezinkulu ukutshalwa kwemali kanye amakhono athile azidingeki. Lokhu kungaba, isibonelo, zewebhusayithi ngqa, enziwe ngezandla zakhe, futhi mhlawumbe yithuluzi online ukuthi ngokushesha emiselwe kokuhlala ngenethiwekhi futhi zibekwe ngenjongo a emfushane ekwazisa abasebenzisi mayelana inkambo okuthile okuthakazelisayo. A ithuba elikhulu idatha khulula web yokukhiqiza izinsiza Izibonisi anikezwa zenethiwekhi.
Download isifanekiso khulula ukudala indawo esikhathini sethu kungaba silula. Ngokuvamile benjalo amafayela rar- equkethe ngetakhiwo letehlukene, okuyinto kuyoba wusizo ukuqaliswa yithuluzi Inthanethi.
I engavamile of izingosi ze-Internet, wenza usebenzisa izifanekiso pre-eklanyelwe, kubhekwe uhlobo efanayo, lokho ngoba izifanekiso xaxa kakade akhishwa webmaster, ayanda namathuba okuba bahlangane yinethiwekhi yomhlaba jikelele twin umzalwane web-nsiza.
Ngezinye izikhathi kungcono hhayi kakhulu, kodwa izicabucabu injini kungukuthi ngakho isimo sengqondo esihle design okungekona okokuqala, kanye nokunye okuqukethwe Web site. Kodwa uma emva zonke ukubukeka yokuqala umthombo Inthanethi Kubalulekile kuwe, khona-ke ezingelapheka ngokushintsha nje isithombe isifanekiso, futhi ngaleyo ndlela unezela okwakhe ukuze yayo kwi-Internet. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuthola isithombe uyiqambe ngokuthi igama elifanayo njengoba isithombe lapho uya ukushintsha, bese uyifaka kufolda efanayo.
Uma ukhetha isithombe ukubheka ubukhulu - enkulu uma Ubukhulu kuhambisane wawungakanani umfanekiso isifanekiso. Uma bengakuqondi kuhluke, ungazama uwahlele esebenzisa izinhlelo ingcaca.
Okunye isici esiphawuleka esithombeni usesho lumayelana caveat ukuthi yisiphi isithombe posted on inethiwekhi kungenziwa bavikelwe ngumthetho ku -copyright. Ukuze usebenzise kuwebhu lamandla ayidingi ukuvakashela kwakho isithombe esikhethekile web-imithombo umnikelo ukulanda isithombe. Zibizwa ngokuthi microstock noma photostocks ezifana web-imithombo okhululekile noma kungase bakhokhise abantu ngezinkonzo imali encane. Isinqumo kungokwakho.
Kulokhu, ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe okuqukethwe umbhalo posted kumawebhusayithi. Kuyadingeka ukuba izihloko izinga - kaningi kuvela ukuthi isici esibaluleke kunazo ekugqugquzeleni eliphezulu imithombo. Dala umbhalo kungaba ngelakho, noma ungaya usizo Ochwepheshe ngubani kuzodala izihloko ngawe ngokufaka kuyo izinkinobho kanye atshele abafundi bakho lonke ulwazi oludingekayo.
Njengalo, nokusetshenziswa izifanekiso ngomumo eyenziwe ezitholakala inethiwekhi global, futhi abanye isinyathelo ukukhanya oku kungenzeka ukwenza ababezibheka Iwebhusayithi ngemali encane kakhulu noma c ephansi, ngakho qiniseka ukulanda khulula iwebhusayithi isifanekiso bese uyakhululeka ujabulele ukuphila.